Longing for “Mee” | The World of Pinkgold
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) on March 5, 2009 at 10:19 am said:
Ellay on March 5, 2009 at 11:12 am said:
It’s beenalong time that i could not reach to your blog and now it seems much greater than before in WordPress.
I m sorry to hear the worse electricity situation there and i wish this situation may overcome soonest!
MrDBA on March 5, 2009 at 2:37 pm said:
ကျွန်တော်လဲ အရင်ကဆို မီးပျက်ရင်အိပ် မီးလာမှ အိပ်ယာထပြီး လုပ်စရာလေးတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်။ လွယ်ပါဘူးဗျာ။
strike on March 5, 2009 at 8:26 pm said:
စိတ်အညစ်ဆုံးက အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ
ုkom on March 6, 2009 at 4:04 pm said:
သီရိ on March 7, 2009 at 9:29 am said:
တစ်နေ.တစ်နေ. မီးမလာလို. အိပ်နေရတာ မျက်နှာတောင် အစ်နေပြီ
Daywalker on March 7, 2009 at 7:17 pm said:
မီးက မလာတာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ခဏခဏ လာနေတာ….။ သူအလာကောင်းလို့ မော်နီတာတောင် တစ်ခါလောင်ပြီး သွားပြီ… တစ်ခါလောက် လာရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ ခဏခဏ မလာပါနဲ့ မီးရာ
နေ့အိပ်မက် on March 10, 2009 at 4:48 am said:
အဲဒါဆို နေ့အိပ်မက်က အညားကြီး ကံကောင်းတေးတာပေါ့…… ဒီမှာတော့ လာတာမှန်တယ်… အချိန်မှန်တာကို ပြောပါတယ်….. 😛
မသက်ဇင် on March 10, 2009 at 7:02 pm said:
မီးလေးဇာ on March 12, 2009 at 8:58 am said:
မီးမလာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလာ မီး လာလည်သွားတယ်နော် ဟိဟိ
မိုးခက်နွယ် on March 30, 2009 at 6:55 pm said:
မန္တလေးမှာတော့ ကျွတ်တွေ ၀ယ်ထားပြီဗျို့…
ည..ညအိပ်ရင်တောင် ရွှေမန်းသားတွေက လည်ပင်းမှာ ကျွတ်စွပ်ပြီးအိပ်တယ်